Mootummaan Abiy, ABO balleessuf Wayyaaneetti Deebi’e! – Oromedia
Home » Oduu » Mootummaan Abiy, ABO balleessuf Wayyaaneetti Deebi’e!
(Oromedia, Finfinnee, 10 Hagayya 2019) Ummanni Oromoo ittisa amansiisaa qabaachuuf WBO jabeeffachuu akka qabu ibsame.
Odeessi keessoo mootummaa Abiy irraa nu gahe akka ibsutti, mootummaan Itoophiyaa wareegama Oromootiin “Itoophiyaa dullattii” deebisee haaromsuuf hojjachaa jira.
Akka Odeessu kun ibsetti, mootummaan Abiy gorsa Birhaanuu Nagaa fi Abbaa Duulaa Gamamdaatiin gaaffi ummata Oromoo ukkaamsuuf hojjachaa jiru.
Gareen Abiy, keessayyuu, “ejjennoo ABO dhabamsiisuu” jabeessee irratti hojajchaa jira.
Sababa kanaanis, yeroo ammaa caasaan ODP/OPDO bakka saditti bahee akka jiru beekameera.
Garee ABO dhabasiisuuf hojjatu kana jalattis Abiy dabalatee kanneen akka Abbaa Duulaa Gammadaa, Shimallis Abdiisaa fi Addisuu Araggaa caasaa jabaa ijaarratanii socho’aa jiran.
Akka maddi kun ibsutti, gareen kun “warra ejjennoo ABO baqsinee balleessuu qabna,” jedhanii dha.
Duula keessaa fi alaa kana ofirraa ittisuuf falli jiru, ummanni Oromoo WBO jabeeffachuu akka qabu maddi keenya hubachiisee jira.
“Ummanni ittisa hin qabne, oggayyuu roorrifama,” kan jedhe maddi keenya kun, mootummaan Abiy, ABO balleessuuf, Wayyaanee hanga aangootti deebisuutti hojjachuuf kutattee akka jiru saaxileera.
Keessayyuu, erga ajjeechaan aangawota mootummaa naannoo Amaaraa irratti raawwatee, mootummaan Abiy gara warra Wayyaaneetti cillaanfatee hojjachaa jiraachuun beekameera.
Odeessi keessaa kun akka ibsutti, ABiy warra Wayyaanee dallansiisuu isaatti hedduu gaabbee jira.
Kanaafis, Abiy nama amanu tokkotti “duraanuu nin maraa dhe; Tigreen xiqqaatu caasaa qaba; kabajaafi naamusa qabsootis qaban” jedhee dubbachuu odeessi kun saaxileera.
Mootummaan naannoo Tigiraayis beekumtii mootummaa Abiyiin, waraana idilee 235,000 milishaa fakkeessee qopheefafchaa akka jirus beekameera.
Mootummaan naannoo Tigiraay akak sababaatti kan dhiyeeffataa jiru, waldhabdee gama Kaabaan Eertiraa, gama Kibbaan Amaaraa waliin jiruu dha.
Akka maddi keenay ibsetti, waanti nama ajaayibu waraanni Tigiraay keessatti leenjifamaa jiran ajajoota waraana biyyaatu kooriifi divizhoniitti baasee kallattiin ajajaa jira.
Previous: Hojiilee Shanan Gannaa
Next: Gaaffii fi Deebiin Gaazexeessaan Dábessá Wakjira Ajajaa WBO Zoonii Lixaa Jaal Marroo waliin taasise.